Ropotamo salad Dareenka farshaxanka - fikradaha guriga iyo beerta
18.09.2014 Waxa Dhejiyay: Maskaxda Farshaxanka
Jiilaal, Fikradaha Guriga, Recipes
Cuntada u kari qofkasta jiilaalka uu jecelyahay - saladhka Ropotamo.
Alaabada loo baahan yahay hal cabir (qiyaastii 8 dhalada weyn ee caadiga ah):
Digir 1 kg
Weel weyn oo ka mid ah dhalooyinka la xareeyay
Weel weyn oo ah basbaas la dubay
Weel weyn oo ah 'yaanyo shiidan ah
Xootiga dharka 1
Weel weyn oo ah digir qasacadaysan (ikhtiyaari ah)
1-2 xiriiriyeyaasha dhir Marina
Saliid - 180 c
Khamri - 180 c
Sonkorta - 50 c
Xusuusin: Xaaladdan oo kale, kuwani waa khudradda guryaha lagu sameeyo iyo baradhada shiidan oo loo diyaariyey iyada oo loo eegayo doorbid shaqsiyeed. Haddii aad go'aansato inaad isticmaasho gasacadaha la soo iibsaday, dammaanad kama qaadayno damaca iyo tayada natiijada dhammaadka.
Waxaan u kariyaa digirta iyo karootada si gooni gooni ah. Karootada jarjar xabadaha, basbaaska la dubay iyo xaleef, dhir jar jartey.
Kuleyli saliidda, geed isbonjilaaga, cusbo iyo sonkor isku kari ilaa iyo milixda iyo sonkorta ay dhalaali doonaan. Ka qaad foornada si aad u qaboojiso.
Waxaan diyaarinaa weel cabirkiisu habboon yahay oo waxaan isku daraynaa karootada la kariyey, qajaarka la jarjarey iyo basbaaska, dhir kuna tuura digirta la kariyey. Ugu dambeyntiina waxaan ku darnaa dhalo tamaandho ah. Walaaq oo ku shub marinade la qaboojiyey. Mar labaad, si tartiib ah ayaan u walaaqnaa. U oggolow inay habeen dhaxanta istaagto si ay si wanaagsan ugu qasto dhadhanka waxyaabaha ku jira. Maalinta ku xigta, aroorta, waxaan ku buuxinnaa dhalooyinka iyo nadiifin. Tani waa!
xilliga qaboobaha guriga, guriga cabashada, cuntada qasacadaysan, jiilaalka, cuntada qasacadaysan, karinayo jiilaalka, karinayo digirta, cuntada sida loo kariyo, cuntada sida jiilaalka, waan ka gunuunaceen, salad, Ropotamo salad, fikradaha guriga, nashqadeynta gudaha, alaabta guriga, fikradaha gudaha, naqshadeynta fikradaha, guri casri ah, qurxinta fikradaha, fikradaha fanka
Ku dar baradho la dubay oo quruxsan qaabka ubax ah. Iska yaree baradho baradho ...
Fikrad madadaalo ah oo loogu talagalay samaynta macmacaanka guryaha-ka sameysan ee loo yaqaan 'hedgehogs'. Waa la samayn karaa ...
Noocyada cajiibka ah ee asian patty pies
Uzbeks iyo Tajiks waxay leeyihiin cunno isku mid ah labada dalna waxay muhiimad weyn siinayaan daadinta ...
Corn tortilla hilib iyo jiis
Alaabta la dubay waxaa laga samayn karaa dhir kala duwan, wax ...
Waxaan kuu soo bandhigi doonaa sida loo karinayo kapama sida aan ugu jecel nahay ...
Jarmalka Hefekranz ama Hefezopf
Hefekranz ama Hefezopf (Waraaqda. Maya Wreath ama Maya Tile) waa jirrabaadda jirrabaadda si ay u faafto ...
Hilib hilib doofaar oo ku shaqeeya hilib doofaar
Fikrad xiiso leh iyo basal fudud oo diyaarin-karis ah iyo hilib hilib doofaar. Tilmaamtan asalka ah ...